DHEGEYSO-Siciid Diiriye Oo Farriin Kulul U Diray Barlamaanka Soomaaliya. – Radio Daljir
Maarso 28, 2017 7:24 g 0
Garoowe, Mar 28 2017-Xildhibaan Siciid Diiriye Maxamed oo horay uga mid ahaan jirey xildhibaanada barlamaanka dowladda Puntland ayaa ka hadlay xukuumadda cusub ee uu dhowaan magacaabay ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo khilaafka kadhashay.
Xildhibaan hore Siciid Diiriye, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xildhibaanada xilligaan wada ololaha kadhanka ah xilli dalku kujiro xaalad adag oo u baahan xukuumad wajahda.
Siciid Diiriye ayaa sheegay in Soomaaliya xilligaan ka gudubtey waqtigii barlamaankun ka koobnaa halka aqal, islamarkaana haddii xildhibaanada aqalka hoose diidaan ay meelmarin doonaan, taasina ay sharaf dhac ku tahay xildhibaanada hadda mooshinka wada.
Ugu dambayn xildhibaanka ayaa waxa uu ugu baaqay xildhibaanada mooshinka ka abaabulaya xukuumadda Soomaaliya inaysan isku ceebayn, aysana dhumin kalsoonidii shacabku ku qabeen